Izindaba - Amakhemikhali ansuku zonke eBaiyun abambe iqhaza kwi-129th Canton Fair
Kusuka ngo-Ephreli 15 kuya ku-24, umbukiso we-129th China Import and Export Fair (“Canton Fair”) uzobanjelwa online. Cishe ababonisi abangama-26000, imibukiso engaphezu kuka-2.7 wezigidi kanye nabathengi abavela emazwenikazi ama-5 bazobamba iqhaza kulo mbukiso. U-Hebei Baiyun Daily Chemical Co, Ltd. uzobamba iqhaza kule Canton Fair, alethe uchungechunge lwemikhiqizo ehlukahlukene, insipho, insipho yokuwasha kanye nensipho yokuwasha. Izinhlobo eziningi zemikhiqizo, ikhwalithi enhle, etholwe kahle ngabathengi.
Sakha igumbi lombukiso eliku-inthanethi leCanton Fair ukukhombisa imikhiqizo ekusakazweni bukhoma. Ngesikhathi seCanton Fair, sizokhipha ukusakazwa okubukhoma okungu-8, kumikhiqizo yethu ehlukahlukene. Imikhiqizo eminingi izokhonjiswa egumbini lethu lokusakaza, futhi yonke imininingwane yemikhiqizo izokwethulwa ngokucophelela. Ngemuva kwalokho uzobona ukuthi yimuphi umkhiqizo esingahlinzeka ngawo, nokuthi iyiphi insizakalo esingayinikeza.
Siyakwamukela abangani abavela emhlabeni wonke ukuhlangana nathi eCanton Fair. Ngaleso sikhathi, ungafunda kabanzi ngefektri yethu, umthamo wethu wokukhiqiza, i-R & D nekhono lokuklama. Siyethemba ukuthi singabambisana nabangane bethu abasha nabangane abadala isikhathi eside futhi sizothuthukisa konke ndawonye.
Igumbi lombukiso leCanton Fair: